Paulo Freire: conscientização - Ololaha Caalamiga ah ee Waxbarashada Nabadda
Paulo Freire: miyir -qabka
June 9, 2020 Quotes 0
Sida uu sheegayo turjubaanka Paulo Freire, "ereyga conscientização waxaa loola jeedaa barashada aragtida is burinta bulshada, siyaasada, iyo dhaqaalaha, iyo in talaabo laga qaado cunsuriyada dulmiga ah ee xaqiiqda jirta."
Baro wax badan oo ku saabsan xigashada adoo booqanaya Ololaha Caalamiga ah ee Nabadda Waxbarashada ee aad u gaarka ah Xigashooyinka Waxbarshada Nabadda & Xusuusta: Buugga Tilmaamaha Waxbarashada Nabadda. Buug-gacmeedka buug-gacmeedka ayaa ah ururinta tifaftirka ee xigashooyinka la sharaxay ee aragtiyada aragtida, dhaqanka, siyaasadda, iyo barbaarinta ee waxbarashada nabadda. Gelitaan kasta oo tixraac / buug-gacmeed waxaa lagu buuxiyaa meme farshaxan ah oo lagugu dhiirigelinayo inaad soo dejiso oo ku faafiso warbaahinta bulshada.
Saamaynta aan dheellitirka lahayn ee COVID-19 ee ku aaddan qowmiyadaha iyo qowmiyadaha tirada yar ayaa u baahan in si deg deg ah wax looga qabto
Jaranjarada Dhaqaalaha waa Midab Midab leh
Barbaarinta Interectional: Ku Dhaqanka Wax-barashada Hal abuurka ee Jinsiga iyo Nabadda Shaqada
October 25, 2019 Publications 0
“Barbaarinta Intersectional: Tababbarka Wax-abuurka ee Dhaqanka ee Jinsiga iyo Nabadda Shaqada,” oo uu qoray Gal Harmat, ayaa baraya barayaasha inay adeegsadaan habab waxbarasho oo casri ah si loogu dhiirrigeliyo ardayda inay dib uga fikiraan dhaqanka, jinsiga, jinsiyadda, jihada galmada, iyo fasalka bulshada. Labada cutub ee ugu horreeya waa marin furan oo bilaash ah si loo soo dejiyo! [sii wad akhriska…]
Monisha Bajaj: waxbarashada nabadda ee muhiimka ah = falanqaynta + wakaaladda
“Barayaasha muhiimka ah ee nabada, manaahijta maxalliga ah ee laxiriira xuquuqda aadanaha iyo arrimaha cadaaladda waa in lasameeyo iyadoo ujeedadu tahay isku mar in lagu beero falanqaynta kaqeybgalayaasha ee sinaan la'aanta qaabdhismeedka iyo dareenka wakaalada ee ku wajahan wax ka qabashada arrimahan.” - Monisha Bajaj [sii wad akhriska…]
Paulo Freire: Xoreyn Sax ah
September 1, 2020 Quotes 1
Xoreyn dhab ah - hannaanka bani-aadminnimada - maahan deebaaji kale oo ragga lagu sameeyo. Xoreynta waa praxis: waxqabadka iyo milicsiga ragga iyo dumarka adduunyadooda si loo beddelo ... ”- Paulo Freire [sii wad akhriska…]